နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ စာရေးပြီး တောင်းပန်လိုက်တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ – ရှအေလငျး
နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ စာရေးပြီး တောင်းပန်လိုက်တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ…မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဝတ်စုံကို သရုပ်ပျက်စွာဝတ်ဆင်တဲ့အတွက် ကျော်ကျော်နန္ဒကို မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံးဗဟိုကနေ အရေးယူတော့မယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ဖတ်ပြီးလောက်ပါပြီနော်….
ကဲ…ဇာတ်လမ်းက အဲမှာတင်စတာပါပဲခင်ဗျာ….ကျော်ကျော်နန္ဒဘာပြန်ပြောထားလဲ ဆိုတာ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်…
အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကျော်ကျော်နန္ဒက သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေတစ်ဆင့် နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီး တောင်းပန်စာလေးရေးသားလာတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ တွေ့ရပါတယ်…
ဒီလိုတောင်းပန်တဲ့နေရာမှာလည်း သူတစ်ယောက်တည်းတင်မဟုတ်ဘဲ အဲဒီဝတ်စုံကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်နာ ဇင်လင်းထက်နဲ့ အတူ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ကျော်ကျော်နန္ဒက ဆိုထားပါတယ်…
ဒီစာလေးကတော့ ကျော်ကျော်နန္ဒရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ တောင်းပန်ထားတဲ့ မူရင်း စာလေးဖြစ်ပါတယ်…
“ကျနော်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး သိက္ခာကျစေမည် အလုပ်မျိုးနောက်မလုပ်တော့ကြောင်းအမူဆောင်များရှေ့ မှောက်တွင် ကတိပေးပါတယ် ၄င်းဝတ်စုံဖန်တီးပေးသော ဒီဇိုင်နာ ဇင်လင်းထက်မှလည်း ထပ်တူ ကတိပေးခဲ့ပါသည်”
ကျော်ကျော်နန္ဒရဲ့ တောင်းပန်တဲ့ Post အောက်မှာ ကွန်းမန့်တွေ အပြိုင်အဆိုင်ဝင်ရေး နေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်…တချို့က ခုလိုအမှားကို တောင်းပန်တာ တော်လိုက်တာ ဆိုပြီး ချီးကျူးထားသလို…
အချို့ကတော့ အမှားတွေခဏခဏလုပ် ပြီးရင် တောင်းပန်…နောက်ကျတော့လည်း ထပ်လုပ်တာပါပဲ ဆိုပြီး ဝေဖန်ထားကြပါတယ်….
သူ့ရဲ့ Post အောက်မှာ အားပေးနေတဲ့သူတွေရှိသလို…သူလုပ်ခဲ့တာတွေကို ထောက်ပြ ဝေဖန်ထားကြတဲ့ ကွန်းမန့် တွေဟာ ခုဆို ရာချီနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ကဲ…ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရော ဘယ်လိုအမြင်လေးတွေရှိကြလဲ ရေးခဲ့ပေးကြပါအုံး…..
Source : Kyaw Kyaw Nanda
မင်ျဂလာပါ ပရိသတျကွီးရေ…မွနျမာယဉျကြေးမှုဝတျစုံကို သရုပျပကျြစှာဝတျဆငျတဲ့အတှကျ ကြျောကြျောနန်ဒကို မွနျမာနိုငျငံသဘငျအစညျးအရုံးဗဟိုကနေ အရေးယူတော့မယျဆိုတဲ့ ကွညောခကျြကို ပရိသတျကွီးတို့ ဖတျပွီးလောကျပါပွီနျော….
ကဲ…ဇာတျလမျးက အဲမှာတငျစတာပါပဲခငျဗြာ….ကြျောကြျောနန်ဒဘာပွနျပွောထားလဲ ဆိုတာ အောကျမှာ ဆကျဖတျကွညျ့ရအောငျနျော…
အရေးယူမယျဆိုတဲ့ ကွညောခကျြထှကျလာပွီးနောကျပိုငျးမှာ ကြျောကြျောနန်ဒက သူ့ရဲ့ Facebook အကောငျ့ကနတေဈဆငျ့ နောကျမလုပျတော့ပါဘူးဆိုပွီး တောငျးပနျစာလေးရေးသားလာတာကို ပွီးခဲ့တဲ့ နာရီပိုငျးအတှငျးမှာ တှရေ့ပါတယျ…
ဒီလိုတောငျးပနျတဲ့နရောမှာလညျး သူတဈယောကျတညျးတငျမဟုတျဘဲ အဲဒီဝတျစုံကို ဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ ဒီဇိုငျနာ ဇငျလငျးထကျနဲ့ အတူ တောငျးပနျပါတယျလို့ ကြျောကြျောနန်ဒက ဆိုထားပါတယျ…
ဒီစာလေးကတော့ ကြျောကြျောနန်ဒရဲ့ Facebook အကောငျ့မှာ တောငျးပနျထားတဲ့ မူရငျး စာလေးဖွဈပါတယျ…
“ကနြျောကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံရုပျရှငျအစညျးအရုံး သိက်ခာကစြမေညျ အလုပျမြိုးနောကျမလုပျတော့ကွောငျးအမူဆောငျမြားရှမှေ့ောကျတှငျ ကတိပေးပါတယျ ၎င်းငျးဝတျစုံဖနျတီးပေးသော ဒီဇိုငျနာ ဇငျလငျးထကျမှလညျး ထပျတူ ကတိပေးခဲ့ပါသညျ”
ကြျောကြျောနန်ဒရဲ့ တောငျးပနျတဲ့ Post အောကျမှာ ကှနျးမနျ့တှေ အပွိုငျအဆိုငျဝငျရေး နကွေတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ…တခြို့က ခုလိုအမှားကို တောငျးပနျတာ တျောလိုကျတာ ဆိုပွီး ခြီးကြူးထားသလို…
အခြို့ကတော့ အမှားတှခေဏခဏလုပျ ပွီးရငျ တောငျးပနျ…နောကျကတြော့လညျး ထပျလုပျတာပါပဲ ဆိုပွီး ဝဖေနျထားကွပါတယျ….
သူ့ရဲ့ Post အောကျမှာ အားပေးနတေဲ့သူတှရှေိသလို…သူလုပျခဲ့တာတှကေို ထောကျပွ ဝဖေနျထားကွတဲ့ ကှနျးမနျ့ တှဟော ခုဆို ရာခြီနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ..
ကဲ…ပရိတျသတျကွီးတို့ရော ဘယျလိုအမွငျလေးတှရှေိကွလဲ ရေးခဲ့ပေးကွပါအုံး…..
တရုတ်မှာ ရဲဗိုလ်လောင်းတွေကို ကလေးအရွယ်ထဲက ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးသလဲ
ရေထဲ မြှုပ်လုနီးပါးပေမယ့် မြစ်ကိုဖြတ်မောင်းဆဲ့ အာဂ ကားဆရာ
ပြည်တွင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆယ်လီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ အချောလေး(၆)ဦး
“နိုင်ငံတစ်ဝန်း Influenza A (H1N1) ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၁ ဦး ရှိသွားပြီတဲ့...